'Ungahambi': UMnyango Wombuso wase-US ukhuphula isexwayiso sokuhamba eVenezuela siye ezingeni lesi-4
Indawo: Ikhaya » Ukuthumela » Ukuphepha » 'Ungahambi': UMnyango Wombuso wase-US ukhuphula isexwayiso sokuhamba eVenezuela siye ezingeni lesi-4
UMnyango Wezwe wase-United States usuphakamise isexwayiso sokweluleka ngezokuvakasha eVenezuela ngezakhamizi zase-US ukuthi “zingahambi,” zisho udlame lomphakathi.
UMnyango ukhiphe isexwayiso esibomvu esiku-Level 4 ngoLwesibili ntambama, uxwayisa abaseMelika ukuthi bagweme izwe ngenxa “yobugebengu, izinxushunxushu zomphakathi, ingqalasizinda yezempilo engeyinhle,” kanye “nokuboshwa ngokungekho emthethweni” kwezakhamizi zase-US.
Iseluleko esisha sezokuvakasha sixwayisa izakhamizi zase-US “ngokungazinzi okuqhubekayo kwezepolitiki” nokuthi kungenzeka babanjwe yimibhikisho emigwaqweni enobudlova engenzeka “ngaphandle kwesaziso.”
Isexwayiso “ngokuqinile” sincoma ukuthi izakhamizi zaseMelika ezizimele zishiye iVenezuela, zibeke iVenezuela esigabeni esifanayo neSyria neNorth Korea. Kuza izinsuku ezimbalwa ngemuva kokuthi i-US iyalele ukuthi kususwe abantu abangahambisani nezimo eziphuthumayo enxusa lalo eliseCaracas, okushiye “benamandla alinganiselwe” okuhlinzeka abezimo eziphuthumayo base-US lapho.
Izwe laseMelika lanyusa ingcindezi eVenezuela ngesonto eledlule, lavuma ukuthi umholi weqembu eliphikisayo ungumengameli wesikhashana futhi wanxusa uMaduro ukuba ehle esikhundleni. IWashington ifake unswinyo enkampanini kawoyela yaseVenezuela i-PDVSA ngoMsombuluko, nokwenze izinsolo ezivela kuNgqongqoshe Wezangaphandle wezwe ukuthi iMelika ihlela ukuvukela umbuso.
Syria I-united states Venezuela
Ihhotela lokuqala le-AC eLos Angeles nguMarriott livulwa eBeverly Hills
Uhlaka olusimeme oludingekayo kumabhizinisi amancane naphakathi wezokuvakasha kusho uNgqongqoshe uBartlett
Izivakashi ze-Songtsam Zijabulela Umlingo we-Azaleas
I-CDC: Ukufa kwe-COVID-19 'kweqile' ngama-24%
Umuthi Omusha Wokwelapha I-Major Depression Disorder
VakashelaiBritish kanye neBritish Airways zilandela izivakashi zase-US
Ukuphazamiseka Kwempilo Yengqondo I-Skyrocket Entsha Nabancane...
Isixazululo Esisha Esisha Sokulungisa Izinzwa
U-46% wamadili ohlelo lokusebenza lwezokuvakasha lwango-2021...
Umuntu Nemvelo. Umuntu we-UNESCO kanye ne-Biosphere ...
ISouth African Airways imemezele iNorth America entsha...
I-India Tourism Ibeka Amasayithi ayo Olwandle Oluvulekile
I-Multiplex Biomarker Imaging Market kulindeleke ukuthi ikhule ...
Ukuvinjelwa kwendiza kwenwetshiwe ezikhumulweni zezindiza eziyi-11 eningizimu yeRussia
Ukufinyelela Okukhethekile kumadivayisi azosetshenziswa ku-Urology...
Ulwazi olusha lokwelashwa kokuvutha kweGPP